Nnukwu ndị ọrụ afọ ofufo n'ime usoro nke nzukọ CHAN 2020 - TELES RELAY
Nnukwu Mgbakọ Ndị Ọrụ Afọ Ofufo n'ime usoro nke CHAN 2020 Organisation
RÉPUBLIQUE CAMEROON CAMEROON
2021 CHAN 2020 na TOTAL ARON 2021
Hapụ DARA JAN 29, 2020
Onye Minista nke Egwuregwu na Mmụta Ahụike, Onye isi nke Kọmitii Na-ahazi Mpaghara maka African Championship (CHAN TOTAL 2020) na African Cup of Nations (CAN 2021) "COCAN 20-21" a nsọpụrụ ịkọrọ ọha na eze banyere mmeghe nke ndị ọrụ afọ ofufo dịka akụkụ nke nzukọ nke CHAN 2020 nke a ga-eme na Cameroon site na Eprel 04 ruo 25, 2020 na saịtị nke Yaoundé, Douala na Limbé - Buéa .
Ndị chọrọ isonye na nhọrọ a ga-emerịrị ọnọdụ ndị a:
Bụrụ onye Cameroon ma ọ bụ bụrụ onye mbịarambịa nwere ọkachamara akọwapụtara;
Atdị dịkarịa ala afọ 18;
Jide opekata mpe BEPC ma ọ bụ CAP (Agbanyeghị, ndị na-ejikwa akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala nwekwara ike itinye);
Master otu n'ime asụsụ abụọ gọọmentị nke Cameroon;
Nwee ezigbo agwa.
Faịlụ ngwa zuru ezu ga-agụnye:
Mpempe akwụkwọ ndebanye aha nke anakọtara site na Mpaghara Egwuregwu Egwuregwu na Ahụhụ Ahụ (Centre, Littoral na South-West), dịkwa na ntanetị na saịtị ahụ https://cocan2021.cm/inscription/
Mpempe akwụkwọ nke National Identity Card;
Mpempe akwụkwọ diplọma ikpeazụ;
Foto agba 4 × 4 nwere aha mbụ na aha ikpeazụ na azụ; Usoro akwukwo akwukwo nke onye akwukwo a bịanyere aka na ya;
Akwụkwọ ozi A4 degaara onye a na-aga ime.
Ekwesịrị ịdebe faịlụ ahụ na ndorondoro Ntugharị, na Ngalaba Mpaghara nke Mịnịstrị nke Egwuregwu na Mmụta Ahụ.s (saịtị Yaoundé, Douala na Limbé-Buea) dị iche iche, emechaghi bido n’abali asaa nke ọnwa asaa n’afọ 07 na elekere atọ nke nkeji iri atọ.
A gaghị anabata faịlụ ezughị ezu.
OT TO KA E SI EGO
Ndị nnọchianya mpaghara nke Ministry of Sports na Mmụta Ahụike
Soro otu n’ime ndị na-ekesa akwụkwọ anyị iji nata ọrụ a na-enye mgbe niile
Mgbapụta Ọrụ Onwe Onye dị ka akụkụ nke nzukọ CHAN 2020
Ihe mere JK Rowling ji eji obi ụtọ na-akwụ ụtụ isi ya na otu mba ọdịmma Britain na - arụ ọrụ - VIDEO
Akwụkwọ akụkọ 6am nke February 01, 2020 - VIDEO